नेपालमा भूमिगत यौन सम्पर्क गर्ने ठाउँ कहाँ कहाँ छन् ? हेर्नुहोस « Npnews
इटहरी नजिकैका खनार, दुहबी, पकली, झुम्का, इनरुवादेखि कोशी ब्यारेजसम्म स–साना सेक्स स्टेसनहरू छन्। ‘एकान्त’, ‘भेटघाट’, ‘स्विट’ जस्ता नाम राखिएका रेस्टुरेन्टहरू मूलसडककै छेउछाउमा भेटिन्छन्। यिनीहरूका मुख्य ग्राहक भनेका चालकहरू हुन्। एक जना ट्रक ड्राइभर भन्छन्, ‘यस्ता रेस्टुरेन्टमा रक्सी, मासु र केटी पाइन्छन्। गाडी चलाउँदा थाकिन्छ। त्यहाँ पसेपछि भोक पनि मेटिने, प्यास पनि मेटिने। पैसा चाहिँ सखाप।’
त्यसपछि पुगिने हेटौँडालाई त गाडीको लोड बिसाउनेमात्र होइन, यौन तिर्खा मेटाउने शीतल चौतारी भने पनि हुन्छ। हेटौँडामा काठमाडाँैदेखिका यौनकर्मीहरूको समेत जमघट हुन्छ। तीन सयको हाराहारीमा यौनकर्मी रहेको अनुमान गरिएको हेटौँडामा प्रहरी र एनजीओ आईएनजीओले यौनकर्मीको निगरानी गरिरहेका छन्।
देशका मुख्य बजार र बसपार्क क्षेत्रमा सेक्स स्टेसन सञ्चालन हुन्छन् भन्ने जानकारी प्रहरीलाईभन्दा बढी अरू कसलाई होला? कुनै शहरमा नयाँ प्रहरी प्रमुख आउनेबित्तिकै उसको पहिलो काम त्यस क्षेत्रका यौनक्रियाकलाप गर्ने होटलमा छापा मार्ने र मान्छे पक्राउ गर्ने हुन्छ। झापा, दमकका डीएसपी रविकुमार पौडेलले जस्तै सबैतिरका प्रहरी प्रमुखले यसलाई काम देखाउने अवसरका रूपमा लिएका हुन्छन्। दमकका होटलमा छापा मारेर पक्राउ गरेपछि होटल व्यवसायीहरू भने असन्तुष्ट बनेका छन्। धेरै ठाउँमा त प्रहरीविरुद्ध होटल व्यवसायीले आन्दोलनै गरेका छन्। प्रहरी र होटल व्यवसायीको यस्तो जुहारी छ महिनाजति चल्छ। ‘त्यसपछि कतै नियन्त्रण पनि हुन्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘कतै प्रहरीको ‘लाइन’ मिल्छ अनि बन्द हुन्छ, छापा मार्ने काम।’
इटहरीका डीएसपी विद्यानन्द माझीले गत वर्ष चैतदेखि चलाएको अभियान भदौबाट रोकिएको छ। उनी यौनधन्दा रोकिएकाले अभियान रोकेको दाबी गर्छन्। नारायणगढका एक होटल व्यवसायी भन्छन्, ‘प्रहरीले यौनधन्दा रोक्न होइन, पैसा कमाउन यस्तो अभियान चलाएका हुन्।’
एउटा शहर, एउटा ठाउँमा मात्र होइन, देशैभरि साना, ठूला शहरमा यौन व्यवसायले विकराल रूप लिइसकेको छ। प्रहरीले छापा मारेर केही जोडीलाई पक्राउ गर्दैमा यसमा नियन्त्रण हुँदैन। यौन व्यवसायलाई बेलैमा व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ। यौनव्यवसायीले नै बेलाबेला नेपालमा पनि रेडलाइट एरिया तोकिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। अब यस मागप्रति गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। शुक्रवार साप्ताहिकमा गोपाल दाहालले लेखेको खबर छ